Tirada Dumar ku Dhex Umulay Xabsiga Gabiley iyo Kuwo Hadda Taagan Waqtigii Dhalmada | Berberanews.com
Home WARARKA Tirada Dumar ku Dhex Umulay Xabsiga Gabiley iyo Kuwo Hadda Taagan Waqtigii...
Tirada Dumar ku Dhex Umulay Xabsiga Gabiley iyo Kuwo Hadda Taagan Waqtigii Dhalmada
Gabiley-(Berberanews)- La-taliyaha Madaxweynaha Somaliland ee Arrimaha Haweenka Marwo Ilhaan Xaaji Miisaan, ayaa markii u horreysay shalay booqatay xabsiga magaalada Gabiley, iyadoo si gaar ah u booqatay dumar u xidhan dembiyo la xidhiidha mashruucii Jiifoo-jaq ee lacagta tirada badan lagu kala dhacay gudaha Somaliland, kuwaasoo qaarkood ku dhex umuleen gudaha xabsigaas, halka kuwo kalena taagan yihiin haatan waqtigii dhalmada.
Marwo Ilhaan Xaaji Miisaan oo haweenka xidhan guddoonsiisay deeq kooban oo ah dhar, ayaa saxaafadda u sheegtay in aanay kaalmadaasi aanay ka iman Madaxtooyada Somaliland, balse tahay mid ay iyadu si gaar ah ugu talogashay haweenka xidhan, ujeeddada socdaalkeeduna salka ku hayo amar Madaxweynaha Somaliland ku siiyey inay ka war-doonto xaaladda dumarka ku xidhan xabsiga Gabiley.
“Deeqdani ma aha deeq Madexweynuhu soo direy ee waa deeq kooban oo aan anigu ugu soo talogalay dumarka maxaabiista ah, waxaanan u socdaa si aan ugu kuurgalo xaaladda ay ku sugan yihiin haweenkan ku xidhan jeelka Gabiley, kuwaas oo dhawaan la ii sheegay inay yihiin haweenka ugu badan ee ku xidhan jeelasha Somaliland, waxaanan ballanqaadayaa inaan farriintooda gaadhsiiyo sida ugu dhaqsaha badan Madexweynaha,” ayey tidhi La-taliyaha Madexweynaha Somaliland ee Arrimaha Haweenka.
“Waxaan ka jawaabayaa soo jeedinta Taliyaha Xabsiga ah ee ah in jeelkan laga dhigo jeelkii haweenka lagu xidhayay. Waxaan leeyahay horta intan ku jirta ilaahay ha ka soo samato bixiyo, waxaananan Ilaahay ka baryayaa in aanay jiri doonin gabadh dambe oo reer Somaliland ah oo la xidho, dembina geli mayaan,” ayey sii raacisay Marwo Ilhaan Xaaji Miisaan.
Waxa kaloo ay La-taliyuhu waxay dumarka xidhan ka codsaday in carruuraha jeelka ugu dhashay loo gudbiyo xarunta agoomaha si loogu daryeelo, balse waxa dalabkaas ku gacan-saydhay hooyooyinka ku dhex umulay jeelka Gabiley.
Cabashooyinkii iyo dalabyada maxaabiista qaarkood.
Haweenka ku xidhan xabsiga magaalada Gabiley oo tiradoodu dhan tahay 45 dumar ah oo ku jira laba qol oo aad cidhiidhi ugu ah marka loo eego baaxadda qolalkaasi oo cabirradoodu dhan yihiin min lix mitir oo isku wareeg ah iyo tirada ku kala jirta, isla markaana kala duwan yihiin fal-dambiyeedyada u xidhan yihiin, ayaa qaarkood u xukuman yihiin mashruucii Jiif oo Jaq ama dhuumo oo dharag, qaar kalena u xidhan yihiin arrimo la xidhiidha tahriibinta mukhaadaraadyo ka mamnuuc ah dalka, oo qaarkoodna ku doodeen in allaabtii ay ganacsi ahaanta u siteen lagu soo dhex qariyey oo aanay waxba kala socon, halka qaar kalena u xidhan yihiin arrimo iska maddaniya, kuwaas oo dhammaantood dalbanaya in il-naxariis leh dib loogu soo eego.
“Waxaa la iga soo xidhay Ceerigaabo, waxaanan hadda xidhanahay oo aan jeelkaa ku jiraa muddo toban sanno ah, aniga oo ku xukuman labaatan sanno oo xadhig ah. Muddada intaa le’eg ee aan xidhnaa waxaan ku xidhnaa oo keliya Gabiley iyo Hargaysa, kiiska la igu xukumayna wuxuu ahaa isku day dil.” Sidaa waxa tidhi haweenay ka mid ah dumarka ku
Xidhan jeelka Gabiley oo u warrantay weriye Jamhuuriya ka tirsan.
Haweenay kale, ayaa iyaduna sheegtay in ay u xidhan tahay hay’ad ajaanib ah, iyadoo u xidhan shaki laga shakiyey oo keliya.
“Waxaan dalkayga ka maqnaa saddex iyo labaatan sanno, aniga oo dalkayga u soo boholyoobay oo dal-tabyo isoo jiidatay aan dalkayga u baahday, ayaa Hay’adda Munadama-tul Dacwal Islaamiya oo aan shaqo-raadis ugu tagay aan ka helay shaqo oo la igu qoray dugsi ku yaal Hargaysa. Kadib waxa dhacday in khilaaf na dhexmaray aniga iyo saraakiishii hay’adda. Way i soo dacweeyeen, waana la isoo xidhay bishii siddeedaad ee sannadkii hore, ilaa haddana waxaan jeelka ku suganahay bilaa xukun oo rumaan ahaan ayaan ku xidhanahay siddeedaa bilood.
Waxaan korsanayey toban carruur ah. Wax war ah kamaan helin muddada intaa le’eg xaalad ay ku sugan yihiin ubadkaygii. Waa agoon aan anigu aan aabbo iyo hooyo u ahay, bilaa xukunna waxaan ugu xidhannahay hay’ad ajaanib a anigoo muwaaddinad ah, welina sharci la ima hor gaynin.” Sidaana waxa tidhi hooyo kale oo ka mid ah haweenka tirsanaya inay caddaalad-darro ugu xidhan yihiin xabsiga Gabiley.
Gabadh kale oo maxbuusad ah ayaa iyaduna halkaas ka hadashay oo dacwadeeda u gudbisay La-taliyaha Madaxwaynaha ee Arrimaha Haweenka, taasoo sheegtay in raashin
qamadi ah oo ay ka soo raratay Harta-Sheekha joonyadihii qaar ka mid ah lagu soo dhex qarsaday dhalooyin khamri ah, waxana hadalladeeda ka mid ahaa; “Harta-Sheekha ayaannu ka soo raranay raashin qamadi ah oo aanu ganacsi ahaan u gaynaynay Hargaysa, waxa dhacday in ay gaadhiga naga soo raacaan meel duleedka Harta-Sheekha ah rag, waxaanay fuuleen gaadhiga dushiisa sare.
Markii aannu soo galnay xuduudda Somaliland ee kantaroolkii ugu horreeyay aannu soo istaagnayba waxa la baadhay gaadhigii, waxana loogu dhex tagay joonyado ka mid ah qamadigii dhalooyin khamri ah, taasi ayaa la igu soo xidhay oo aan ku mutaystay in aan maanta xabsiga ku jiro, iyada oo ubadkaygiina ku silcayaan Hargaysa.”
“Waxa jirtay dhawaan mashruuc waddanka oo dhan ka jiray oo lagu dhacay dad badan oo Somaliland ah, oo ahaa Jiif oo Jaq ama dhuumo oo dharag. Lacago ayaan la isku soo urrurin jiray oo qofba gacmo ayuu masuul ka ahaa. Lix iyo labaatan qof oo aannu isku kiis ahayn ayaa labadayadaasi kaga hadhsanahay xabsiga. Waxaannu hore rumaan ahaan ugu xidhnayn sannad, kadibna waxa lanagu xukumay sannad xabsi ah, waanu dhammaysanay.
Annagoo dhammaysanay ayaannu haddana ilaa hadda ku jirnaa, kuwii nala midka ahaana oodda ayaa laga qaaday. Annaga waxa la noogu dheggan yahay waxa lanaga waayey laaluush oo wax aannu ku bixinaba ma hayno.” Sidaana waxa tidhi haweenay kale oo ka mid ah dumarka ku xidhan xabsiga magaalada Gabiley.
Muuqaalkii ugu naxdinta badna ee lagala kulmay jeelka gudihiisa:
Intii La-taliyaha Madaxwaynaha ee Arrimaha Haweenka marwo Amaal Xaaji Axmed Miisaan iyo Maamullada Gobolka iyo degmadu ay ku gudo-jireen ayaa muuqaalkii ugu naxdinta badnaa ee ay kala kulmeen haweenka ku xidhnaa xabsiga wuxuu ahaa markii ay ugu galeen qolkii labaad ee haweenku ku jireen afar dumar ah oo jaqsiinaya ubad yaryar oo da’ahoodu u dhexeeyeen min laba bilood ilaa siddeed bilood, kuwaas oo ku dhex dhashay gudaha jeelka iyo hooyo kale oo uur leh oo sheegtay ku jirto bishii sagaalaad ee uurka, waxaanay La-taliyuhu u soo jeedisay hooyooyinkaasi in loo qaado ubadka oo loo geeyo xarumaha agoomaha ee dalka maadaama, jeelasha duruufaha caafimaad iyo saxo ahaaneedba laga wacan yahay.
Haseyeeshee, haweenkaa dhalay ubadka yaryar ayaa si adag gaashaanka ugu dhuftay in ay aqbalaan soo jeedintaa La-taliyuhu u soo bandhigay, balse waxay ku nuuxnuuxsadeen in ay ku dhex haysanayaan jeelka gudihiisa, ilaa inta ay xorriyadooda dib u helayaan.
Waa Markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo ka socda Madaxtooyada Somaliland ay ugu baxaan jeelasha dalka si ay u soo helaan xogaha la xidhiidha xaaladaha maxaabiista iyo jeelasha ay ku jiraanba.
Xigasho Jamhuuriya online
Previous articleSheekadii Dhex Martay NIN ADAYG iyo NIN JILEEC
Next articleHow selectively some parties were chosen over others? An open letter to Mr. Siilanyo the president of Somaliland